FanoloranaSaryFiangonanaProjet d'EgliseTantaran'ny FPMA ToulouseKomity Tafo ToulouseDiaryAntson'ny FilazantsaraFanompoam-pivavahanaMpitandrinaKatekomenaDingana Faha-9FifandraisanaToritenyFiofananaDinidinika sy fampieritreretanaVaovaoTafo ToulouseFaritany Atsimo AndrefanaVondronasaSerasera sy FiraiketanaVola sy FanananaContacts
Sintony Henoy D9 Tweet
D9 - Ny vavaka Écrit par Andriamiandra Elysée Lundi, 03 Juin 2013 19:43 NY VAVAKA Hoy ingahy Nietzche, filozofa alemana nalaza : “Mahamenatra izany hoe mivavaka izany”. Hoy koa ingahy Alfred de Vigny mpanoratra frantsay : “Ny mihorohoro, sy ny mitomany ary ny mivavaka dia samy hakanosana avokoa”. Hoy kosa ingahy Billy Graham mpitoriteny ngezalahy : “Mbola tsy fantatsika fa manan-kery lavitra ny olon’Andriamanitra mandohalika mivavaka noho ny lehilahy miery aorian’ny an-dian-tafika iray”. Ary dia hoy ny Tompo : “Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ianao ka tsy rera­ka” (Lio. 18 : 1). Manamafy izany i Paoly apostoly ka hoy izy : “Fa mivavaha man­drakariva ao amin'ny Fanahy amin'ny fivava­hana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin’izany amin’ny faharetana” (Efes. 6: 18).
Fa inona moa no atao hoe vavaka ? Ary ny olona manao ahoana no mivavaka ? Raha ny ntaolo malagasy no anontaniana dia ny fangataham-pitahiana amin'ny razana na izay lazainy hoe “Zanahary” no iheverany ny hoe vavaka.
Fa raha ny Soratra Masina kosa no jerena dia resaka mivantana ifanaovan'ny olon' Andriamanitra aminy no atao hoe vavaka. Ny zavatra iray nitovizan'ny mpaminany rehetra ao amin'ny Baiboly, sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra nampiasainy teto amin izao tontolo izao dia ny fitiavam-bavaka. Mety ho samy hafa ny fiainan'izy ireo, ny tomba fiteniny, ny fotoana niasàny ho an'ny Tompo, fa ny fo tia vavaka kosa dia nitovizan'izy rehetra. Lazain'ny mpan­dinika ny Filazantsara fa ny teny hoe mivavaka sy ny hoe vavaka dia mihoatra in-25 no voalaza raha ny amin'i Kristy no dinihina.
Inona no anton'ny ivavahana ? Misy antony maromaro mampirisika antsika hivavaka
1° Asa. 6:2-4 “Izahay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana”
Zava-dehibe tamin'ny Apostoly ny vavaka ary izay rehetra te-hanaraka ny dian'izy ireo dia tokony hiaina tahaka azy ireo koa.
Na dia ny Tompo aza rehefa nitafy nofo izy ka tonga olombelona dia hita tamin'ny fiainany ny fitiavany nivavaka ary nahatonga ny sasany aza hangataka taminy hoe “Tompoko, mampianara anay hivavaka”.
3° Efes. 6:12, 18 : “Fa isika tsy rnitolona amin'ny nofo aman-dra fa amin'ny fanapahana
sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ... Mifahara ary ka sikino famaharinana ny valahanareo ... Ary mivavaha mandrakariva amin’ny Fanahy… »
Misy ny devoly na dia tsy inoan'ny olona maro aza izany. Ny kristiana dia manam­-pahavalo ary ny devoly no fahavalony (1Pet.5:8). Rehefa natoron'Andriamanitra azy ireo fiadiana samihafa dia nambarany fa ny fivavahana no hery ho enti-mampiasa ireo fiadiana rehetra ireo.
4° Heb.7:25 : “Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Izy satria velona mandrakizay hanao fifonana azy” ;